पर्समा च्यातिएको पैसा राख्दा के हुन्छ ? थाहा पाउन पढ्नुहाेस र सेयर गर्नुहाेस – ताजा समाचार
पर्समा च्यातिएको पैसा राख्दा के हुन्छ ? थाहा पाउन पढ्नुहाेस र सेयर गर्नुहाेस
हरेक व्यक्ति चाहाना हुन्छ गोजीमा प्रशस्त पैसा होस् । आफ्नो पर्स कहिल्यै खाली नहोस् । तर, मानिसले राम्रै पैसा कमाए पनि बचत नहुने, खर्च बढ्ने अधिकांशको साझा समस्या बनेको हुन्छ ।
यस्तो हुनुमा ज्योतिष शास्त्रले केही धार्मिक कारण रहेको बताउँछ । शास्त्रअनुसार पर्समा पैसाबाहेक अनावश्यक कागजपत्र राख्नु हुँदैन । अधिकांश मानिसले पर्समा पैसाका अलाव अरु केही कागजात समेत राख्ने गरेका हुन्छन् । पर्समा त्यस्ता केही कागजात राख्दा नकारात्मक उर्जा पैदा हुने शास्त्रले बताउँछ । यसले जीवनमा आर्थिक संकट समेत निम्तिन्छ ।
ज्योतिषशास्त्र अनुसार केही यस्ता चीजहरु छन्, जो पर्समा राख्नु हुँदैन । अन्यथा यसले धनको क्षति मात्र होइन स्वास्थ्यमा समेत हानि पार्ने धार्मिक मान्यता राखिन्छ । के के कुरा पर्समा राख्नु हुँदैन ?
१. अनावश्यक कागजात आफ्नो पर्समा कहिल्यै पनि अनावश्यक कागजात राख्नु हुँदैन । पुराना तथा च्यातिएका कागजात पर्समा राख्दा सम्पत्ति आफू रहँदैन । देवी लक्ष्मीले यस्ता ब्यक्तिहरुलाई सम्पन्नता नदिने धार्मिक विश्वास गरिन्छ ।
२. च्यातिएका वा फाटेका नोट कतिपय मानिस च्यातिएको, डढेको वा काटिएको नोटहरु पर्समा राख्ने गर्दछन् । तर यस्ता नोट पर्समा राख्ने मानिसलाई भाग्यले साथ नदिने धार्मिक मान्यता छ । यस्तो नोट पर्समा राख्नाले नकारात्मक उर्जा पैदा हुने र आर्थिक संकटको अवस्था आउने विश्वास गरिन्छ ।
३. ब्लेड/चक्कू वा धारिलो हतियार केही मानिस पर्समा ब्लेड, सानो चक्कू वा धारीलो हतियार पनि राख्ने गर्दछन् । तर यस्ता वस्तु पर्समा हुदाँ सो व्यक्तिका लागी नकरात्मक ऊर्जा सञ्चार गराउने र अपराधिक मानसिकता बनाउन प्रेरक हुने गर्दछ । साथै कतिपय अवस्था यी वस्तु आफ्नै लागि पनि घातक र हानिकारक हुन सक्छन् ।
४. मृत व्यक्तिको तस्वीर केही मानिस सम्झना स्वरुप मृत आफन्त वा परिवारजनको तस्वीर पर्समा राख्ने गर्दछन् । तर, पर्समा कुनै पनि मृत व्यक्तिको तस्वीर राख्नु अशुभ मानिन्छ । यसले मानिसको आयुमा हानी गर्ने र मृत व्यक्तिको मात्र स्मृति बल्झाइरहने हुन्छ ।
५. उधारो तिर्ने सूची खर्च व्यवस्थित बनाउन केहि मानिस किनमेल तथा लेनदेनको सूचीलाई पर्समा राख्ने गर्दछन् । किनमेल र लिन बाँकी रकमको सुचीले खासै असर नपारे पनि आफूले तिर्न बाँकी रकमको सूची भने पर्समा राख्नु हुँदैन । यसले व्यक्तिमा नकरात्मकता उर्जा बनाउने र स्वयम्लाई कमजोर दर्शाउने गर्दछ ।
६. देवी देवताको तस्वीर धर्मकर्ममा आस्था राख्ने केही व्यक्तिहरु पर्समा देवी–देवताको तस्वीर राख्ने गर्दछन् । तर कहिल्यै पनि पर्समा देवीदेवताको तस्वीर राख्नु हुँदैन । ज्योतिषशास्त्र अनुसार भगवानको यन्त्र पर्समा राख्न मिले पनि तस्वीर भने राख्नु हुँदैन । पर्समा देवी देवताको तस्वीर राखी शौचालयसहित असुद्ध स्थानमा पनि भुलेर गइने हुँदा यसको प्रभाव व्यक्तिको जीवनमा समेत पर्ने गर्छ ।
७. पुराना बिल आफूले खर्च गरेको वा रकम तिरेको बिललाई मानिसहरु पर्समा राख्ने गर्दछन् । तर कहिल्यै पनि पुराना बिलहरु पर्समा राख्नु हुदैन । यसले पर्समा धनको समस्या निम्त्याउने र धन आफुसंग नटिक्ने मान्यता छ ।